ခင်မင်းဇော်: Cologne မြို့ကို ရောက်တယ် လျှောက်လည်...
Cologne မြို့ကို ရောက်တယ် လျှောက်လည်...
ဘူတာကြီးထဲကို ဆင်းလာတော့ ကျမသူငယ်ချင်းကို တွေ့ရတော့ ၀မ်းသားအားရ နှုတ်ဆက်ကြတာ သူ့သမီးကတောင်လန့်သွားလေရဲ့။ ဒါနဲ့ သူတို့ကားနဲ့ တည်းမယ့်အိမ်ကို လိုက်ပို့ပြီးနောက်နေ့ နေ့လည်လာခေါ်မယ်တဲ့။ အဲဒီနေ့ ညဘက်မှာ ကျမသူငယ်ချင်းတွေ အလုပ်လုပ်တဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်လေးကို မမာနဲ့ တူတူသွားကြတယ်။ ဆိုင်လေးက ချစ်စရာလေးပဲ။ ဆိုင်က စားဖိုမှုး ထိုင်းမက ထိုင်းက လာတယ်ဆိုတော့ သူတို့ ထိုင်းစာလေးတွေ လုပ်ပြီးဧည့်ခံတယ် နောက် ထိုင်းလိုလာပြောတယ်။ ကိုယ်ကလဲ ဆ၀ါဒီခ ကလွဲပြီး ဘာမှမတတ်တော့ ဂျာမဏီရောက် သူငယ်ချင်းတွေက ရယ်ကြတယ်။ သူတို့က ထိုင်း စားဖိုမှုးတွေ နဲ့ပေါင်းပြီး ကိုယ့်ထက်တောင် ထိုင်းလိုတတ်နေသေးကိုးး။ ဆိုင်ရှင်က ဗမာပဲတဲ့။ ဒါပေမယ့် မတွေ့ခဲ့ဘူး။ အဲဒီကနေ ညတော်တော်နက်မှ ပြန်ဖြစ်တယ်။ နောက် အိမ်ရောက်တော့ မနက်ဖြန်လျှောက်လည်ဖို့ ကိုအောင်သူ ရုံးပိတ်ရက်နဲ့ တိုက်တာမို့ အဆင်ပြေပြေ နဲ့ လိုက်ပို့မယ့်လူ ရသွားတယ်ပေါ့။
မူလတန်းကတည်းက ငယ်သူငယ်ချင်း၊လာကြိုပေးတဲ့ မမာတို့နဲ့ အတူ
ကိုလုံးမြို့ကတော့ ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ မီဒီယာမြို့ပါပဲ။ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေရဲ့ ရုံးချုပ်တွေ အားလုံးရှိသလို နိုင်ငံခြားကိုလွှင့်တဲ့ ဒီဒဗလျူ(DW) ရုပ်သံလိုင်းလဲ အဲဒီမှာပဲ အခြေစိုက်တယ်။ အဲဒီရုံးနားကို သွားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။ အဆောက်အဦးကြီးက လမ်းကို ဖြတ်ပြီးဆောက်ထားတယ်။ မီဒီယာမြို့တော်ဖြစ်တော့ သတင်းထောက်တွေ များပြီး အားလုံးကဈေးကြီးသတဲ့။ (သတင်းထောက်တွေ ဆိုတော့ ၀င်ငွေများတယ် သုံးတယ် ဖြုန်းတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာ ထင်ပါတယ်။)
အဲဒါကတော့ နိုင်ငံခြားကို သီးသန့်ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဂျာမဏီရုပ်သံ (ပြည်တွင်းလိုင်းအတွက်မဟုတ်)
ကိုလုံးမြို့လို့ ပြောတာနဲ့ တွဲပြီးနာမည်ကြီးတာက အော်ဒီကလုံး ရေမွှေးပါပဲ။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အော်ဒီကလုံးအနံ့လေး ရှုလိုက်ရရင် ခေါင်းမူးပြေလို့ အမောပြေလို့ ဆိုတဲ့ အဆိုကြောင့် ဒီနာမည်ကို ရင်းနှီးနေတာပါ။ အဲဒီရေမွှေးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချတဲ့နေရာကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တိုင်း အရောက်သွားကြတယ်ဆိုပြီး ကျမကိုလဲ လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။
သူတို့ ဆိုင်ရဲ့ နံရံမှာ နပိုလီယန်ဘုရင်က ၄၇၁၁ လို့ ရေးပေးခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့ရေမွှေးမှာ အဲဒီနံပါတ်ကို ထည့်ထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အော်ဒီကလုံးရေမွှေးရဲ့ သင်္ကေတအဖြစ် ၄၇၁၁ ကို ဂုဏ်ယူသတ်မှတ်ထားတာမို့ ဆိုင်ရဲ့ ရှေ့မျက်နှာစာမှာ ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
နပိုလီယန်ဘုရင်က ရေးပေးနေတဲ့ပုံ ပန်းချီကားကို အတွင်းနံရံမှာ ခုလို ရေးဆွဲထားတယ်။
4711 ဆိုတာ အော်ဒီကလုံးရေမွှေးရဲ့ သင်္ကေတ
အထဲကို ၀င်သွားရင် ရေမွှေးတွေကျနေတဲ့ ရေပိုက်ခေါင်းနဲ့ ဘေစင်ကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါရေမွှေးတွေဆိုလို့ လက်နဲ့ခံပြီး ရှုကြည့်တော့ ငယ်ငယ်က ရှုခဲ့ဖူးတဲ့ အနံ့ကို သတိတရဖြစ်မိပါသေးတယ်။ခုတော့ ရေမွှေးအသစ် အနံ့အမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပေမယ့် အော်ဒီကလုံး အနံ့မူလလက်ဟောင်းကတော့ လူသိများပြီး လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလို့ရအောင် ပုလင်းသေးသေးလေးတွေနဲ့ စီစဉ်ပေးထားတာမို့ ရောင်းကောင်းနေဆဲပါ။
ပြီးရင် အရောင်းစာရေးမဆီမှာ ငွေချေဖို့ တန်းစီ
နောက်တနေရာကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းပါ။ ကျမလည်တဲ့ ရက်က တနင်္ဂနွေ ဖြစ်တာမို့ လူပိုစည်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီမြို့မှာ နေတဲ့ သူတွေတောင် မရောက်ဖူးတဲ့ မြေအောက်ခန်းတွေကိုပါ ဖွင့်ပေးတဲ့ ရက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တာမို့ အောက်အထိ ဆင်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ မြေအောက်မှာဘုရားရှိခို့ဖို့ အခန်းတွေ လုပ်ထားတာ တွေ့ရတော့ သူတို့က မြေအောက်မှာလဲ ပုန်းခိုရင်း ဘုရားရှိခိုးနိုင်အောင်များ လုပ်ထားသလား တွေးမိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ အပေါ်က ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးလဲ ရှိနေပြီး ဘာလို့ မြေအောက်ခန်းတွေ အများကြီး လုပ်ထားသလဲ ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဂျာမန်လူမျိုးတွေနဲ့ ခင်မင်ခဲ့ရင် ဒီမေးခွန်းကို မေးချင်ပါသေးတယ်။
ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါ မြည်တဲ့ ဂီတသံကို အပေါ်ဘက်က လာတာမို့ ဆောင်းဘောက်စ် များတပ်ထားသလား လိုက်ရှာကြည့်တော့ မျက်နှာကျက်လို နေရာကနေ အသံမြည်အောင် လုပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အလင်းရောင်ဝင်အောင် ထည့်ထားတဲ့ မှန်တွေပေါ်မှာလဲ တော်တော့်ကို ရှေးကျတဲ့ ပန်းချီလက်ရာတွေနဲ့ မို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်စိတ်နဲ့ အဲဒီဘုရားကျောင်းထဲ အေးအေးလူလူ တနေ့လုံး နေပစ်ချင်စိတ်တောင် ဖြစ်မိပါတယ်။
ဂီတသံစဉ်တွေတီးခတ်တာ အဲဒီကရိယာတွေကတဲ့၊ (ပိုက်လိုင်းကြီးတွေလို သံအခေါင်းကြီးတွေ နံရံမှာ တပ်ထားတာ)
အဲလို မှန်တွေ အပေါ်ပိုင်းနံရံ ပတ်ပတ်လည်တပ်ထားတယ်
ကျမအမေဖက်က အမျိုးတွေက တရုပ်ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တာမို့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက ကျမနဲ့မစိမ်းပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ဒီနေရာကို ရင်းနှီးနေသလို ခံစားရမိတာထင်ပါရဲ့။ အော်ဒီကလုံးရေမွှေးဆိုင်နဲ့ ဒီဘုရားကျောင်း ၂ ခုနဲ့တင် ဒီခရီးကို တန်တယ်လို့ ကျမက တန်ဖိုးဖြတ်မိပါတယ်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:41 PM
Dear Ma KM Zaw,
Please check the spelling of the title. Köln (in German) and Cologne (in Eng).
cologne ရောက်တုန်း ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတာနဲ့တင် တန်တယ်လို့လဲ ပြောဦးလေ...
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးသွားရင်း အခုလို ပျော်ပျော်ပါးပါး လည်ဖို့အချိန်တွေရလို့ အစ်မကတော့ တော်တော် ကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ အားကျမိတယ်။
အင်္ဂလိပ် လို စာလုံးပေါင်း ပြင်လိုက်ပါပြီ။
အနောနီးမတ် ...ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ တွေ့ရတော့ လာလည်တာနဲ့တင် ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ သူတို့က တဖွဖွ ပြောခဲ့သလို ကျမကလဲ တော်တော်ပျော်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်အားလုံး စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါနိုင်ဖို့ ကူညီခဲ့သူတွေကြောင့် ခုလို သွားနိုင်တာပါ။
Is it Cologne Cathedral? so beautiful...
အမပေးမယ့်ရေမွှေးပုလင်းလက်ဆောင်လာယူပါတယ် အဟဲ ။
အမဘလော့နာမည်ကို ပြည်တွင်းက seven days news ဂျာနယ်မှာ တွေ့လိုက်ပါတယ်။ နီကိုရဲနဲ့ သူငယ်ချင်း အမက လွမ်းကြောင်း ရေးထားတယ်လို့ ပါတယ်။
ရေမွှေးကို ဘုံဘိုင်နဲ့ ဖွင့်ထားတာ သဘောကျလိုက်တာ..
သတင်းထောက်တောင် ဖြစ်ချင်လာပြီ အစ်မရေ။ အဲ့မြို့ ကိုရောက်ဖူးချင်လို့ လေ။
သန္တာပါ။ အမဘလော့ကိုအမြဲဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမအချိန်ရရင် အခုမှမလုပ်တတ် လုပ်တတ်လုပ်ထားတဲ့ သန္တာ့ဘလော့လေးကို ကြည့်ပြီး ဝေဖန်ပေးပါအုံးလို့။ မတွေ့ရတာ ကြာပြီနော်။ အမကိုတော့ လင့်ထားတယ်။
အမ ရယ် ဂျာမဏီ ကိုတော့ သွားမ၀ယ်နိုင်ဘူးလေ ..အမြဲသွက်လက် ပြုံးပျော်နေတဲ့ အမ ကို ချစ်စ်စ် ..အာဘွား...း)